प्रचण्ड बुहारी सृजना आफू माथि भएको अन्याय विरुद्ध अब चुप नबस्ने ! – Kendra Khabar
प्रचण्ड बुहारी सृजना आफू माथि भएको अन्याय विरुद्ध अब चुप नबस्ने !
२०७५, ६ मंसिर बिहीबार ०७:४९
ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा मङ्सिर ३ गते बिहान प्रकाश दाहालको पहिलो स्मृति सभा आयोजना गरिएको थियो । प्रचण्डले उक्त कार्यक्रम मार्फतनै दिवंगत छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुको नामबाट खोलिएको ‘प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान’ घोषणा पनि गरेका थिए। यस्तै कार्यक्रममै प्रकाश दाहालको स्मृतिमा निर्माण गरिएको स्मृति ग्रन्थ पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
सार्वजनिक गरिएको स्मृति ग्रन्थमा स्वर्गीय प्रकाश दाहालको पत्नीको रुपमा बिना मगरको मात्र नाम उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो नाम नराखिएको प्रति प्रकाश दाहाल पत्नी सृजना त्रिपाठीले आपत्ति जनाएकी छन् ।
आफ्नो नाम उल्लेख नभएको विषयमा बोल्दै ‘स्मृति पुस्तक’मा आफ्नो नाम नभेट्दा आलो घाउमा नुन छर्केको आभाष भएको सृजनाले बताएकी छिन्।
पुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा प्रकाश दाहाल बारे संक्षिप्त परिचयमा बीना मगरको नाम पत्नीको रुपमा उल्लेख भएता पनि आफ्नो नाम नभेटेपछि आफू निकै दुःखी भएको उनले बताइन् ।
प्रकाशको संक्षिप्त परिचयमा सृजनातर्फका छोरा प्रसिद्धको नाम भने उल्लेख गरिएको छ। उनैले जन्माएको छोराको नाम खुलाएको भएता पनि छोरा जन्माउने सृजनाको नाम भने पत्नीको रुपमा उल्लेख नहुँदा आफू विछिप्त भएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो छोरालाई स्वीकार गर्ने प्रचण्ड परिवारले आफूलाई अस्विकार गर्नुको कारण भने बुझ्न नसकेको प्रति उनको आपत्ति रहेको बताएकी छिन्। धेरै समय देखि आफू अन्याय विरुद्ध नबोलेको कारण झन् अन्याय बढेको भन्दै अब भने अन्याय विरुद्ध चुप नबस्ने सृजनाको सोच रहेको बुझिएको छ।